Bhaibheri Rinotii Nezvechivi?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mingrelian Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quiche Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Uruund Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Chii Chinonzi Chivi?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Chii Chinonzi Chivi?
Chivi manzwiro, mafungiro kana kuti chero chinhu chipi zvacho chingaitwa asi chichipesana nezvinodiwa naMwari. Izvi zvinosanganisira kutyora mitemo yaMwari nekuita zvisina kururama pamberi pake. (1 Johani 3:4; 5:17) Bhaibheri rinoratidzawo kuti kurega kuita chinhu chakarurama chaunenge uchitarisirwa kuti uite, kutoita chivi.​—Jakobho 4:17.
Pamitauro yakatanga kushandiswa pakunyora Bhaibheri, shoko rekuti chivi rinoreva kupotsa. Semuenzaniso, paiva nemasoja emuIsraeri anonzi aiva nyanzvi pakupotsera matombo nezvipfuramabwe, zvekuti “aisapotsa.” Kudai shoko rokuti aisapotsa raizoshandurwa sezvariri, raizonzi “aisaita chivi.” (Vatongi 20:16) Saka, kuita chivi zvinoreva kutadza kuita zvinonyatsodiwa naMwari.
Mwari ane kodzero yekuudza vanhu zvavanofanira kuita nezvavasingafaniri kuita nekuti ndiye Musiki. (Zvakazarurwa 4:11) Tinozvidavirira kwaari pane zvatinoita.​—VaRoma 14:12.
Zvinoita here kuti munhu asatombotadza?
Aiwa. Bhaibheri rinoti “vanhu vose vakatadza, vakakundikana kusvika pakubwinya kwaMwari.” (VaRoma 3:23; 1 Madzimambo 8:46; Muparidzi 7:20; 1 Johani 1:8) Zvakafamba sei?
Vanhu vekutanga Adhamu naEvha, vakasikwa mumufananidzo waMwari uye vasina chivi. (Genesisi 1:27) Asi kusateerera kwavakazoita ndiko kwakaita kuti vazova nechivi. (Genesisi 3:5, 6, 17-19) Pavakazobereka vana, vakavabereka vainewo chivi, sezvinongoita chirwere chekuberekwa nacho. (VaRoma 5:12) Mambo Dhavhidhi akazvitaurawo achiti, ‘Ndakaberekwa ndiine kukanganisa.’​—Pisarema 51:5.
Pane zvivi zvakakura kupfuura zvimwe here?
Ehe. Semuenzaniso, Bhaibheri rinoti varume vemuSodhoma “vakanga vakaipa uye vaiva vatadzi vakanyanya,” zvekuti chivi chavo chainge chiri “chikuru kwazvo.” (Genesisi 13:13; 18:20) Chimbonzwa zvinhu zvitatu zvinoita kuti chivi chizonzi chakakura.
Chivi chacho chinenge chaitwa. Bhaibheri rinotinyevera kuti tisaite zvivi zvakakura zvakadai seunzenza, kunamata zvidhori, kuba, kudhakwa, ugororo, kuponda, uye kuita zvemidzimu. (1 VaKorinde 6:9-11; Zvakazarurwa 21:8) Bhaibheri rinoratidza kuti izvi zvakasiyana nemashoko anotaurwa nemunhu kana kuti chinhu chaanoita asina kuzvironga zvobva zvarwadzisa vamwe. (Zvirevo 12:18; VaEfeso 4:31, 32) Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinotikurudzira kuti tisarerutsa chero chinonzi chivi, nekuti zvinozopedzisira zvaita kuti tiite chivi chakakura.​—Mateu 5:27, 28.
Chaita kuti chivi chacho chiitwe. Zvimwe zvivi zvinoitwa nemhaka yekusaziva zvinodiwa naMwari. (Mabasa 17:30; 1 Timoti 1:13) Bhaibheri harirerutsi zvivi zvakadaro asi rinoratidza kuti zvakatonyanya kuipa ndezviya zvinoitwa nemaune. (Numeri 15:30, 31) Kuita zvivi nemaune kunoratidza ‘kuipa kwakaita mwoyo.’​—Jeremiya 16:12.
Chakaitwa kakawanda zvakadini. Bhaibheri rinoratidzawo kuti pane musiyano pakati pechivi chinoitwa kamwe chete uye chivi chinoitwa kwenguva yakati rebei. (1 Johani 3:4-8) Vaya vane “tsika yokuita chivi nemaune,” asi vava kuziva zvinodiwa naMwari, vanowana mutongo wakakura kubva kuna Mwari.​—VaHebheru 10:26, 27.
Vaya vanenge vaita chivi chakakura vanogona kunetseka zvakanyanya nemhaka yezvavanenge vakanganisa. Semuenzaniso, Mambo Dhavhidhi akanyora kuti: “Kukanganisa kwangu kwapfuura musoro wangu; kuri kundiremera kwazvo somutoro unorema.” (Pisarema 38:4) Asi Bhaibheri rinotinyaradza nemashoko okuti: “Munhu akaipa ngaasiye nzira yake, uye munhu anokuvadza ngaasiye kufunga kwake; uye ngaadzokere kuna Jehovha, iye achamunzwira ngoni, uye kuna Mwari wedu, nokuti achakanganwira zvikuru.”​—Isaya 55:7.
Kutenda Uye Kunamata Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Mwari ane hanya nematambudziko edu here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Chii Chinonzi Chivi?
ijwbq nyaya 96
Bhaibheri Rinogona Kunyaradza Vaya Vari Kuzvipa Mhosva Here?
Kukanganwira Kuita Sei?
Chivi Chekutanga Chaiva Chii?
Chii Chinonzi Ruponeso?